Sida haweeney reer Niger ah ay gacan uga geysaneyso dhismaha nabadgalyadeeda xaafaddeeda - Equal Access International
Nabadda iyada oo loo marayo horumarka II (PDev II)
Xaafada Ni Ima, sida xaafadaha badan ee Niger, waxaa jira adeegyo bulsho oo aad u yar iyo rabshadaha ka dhex dhaca dhalinyarada maxalliga ah waa dhacdo caadi ah.
Laakiin tani maahan sheeko ku saabsan rabshadaha. Tani waa sheeko ku saabsan rajada iyo isbedelka. Sannadkii 2010 Ni Ima waxay rajaynaysay inay wax ka beddeli karto xaafaddeeda iyada oo la abuurayo koox dhagaystayaal ah oo gabi ahaanba ka mid ah haweenka maxalliga ah.
Toddobaad kasta haweenku way isu yimaaddaan, dhagaystaan ​​barnaamijyada raadiyaha Sada Zamunci (bandhig maamul wanaag) ama Gwadaban Matasa (bandhig dhalinyaro ah), oo labadaba ay abuurtay EAI. Ka dib waxay ka wada hadleen mowduucyada laga soo saaray barnaamijyada, kuwaas oo badiyaa ku jiray dulqaad, taageero isweydaarsi iyo sida loo maareeyo khilaafaadka.
Kooxda ayaa isu yeedhay Tashi da Kanka (ama kac oo kac naftaada) oo dhaqso ayey bilaabeen inay ku noolaadaan ujeedkooda. Iyaga oo kaashanaya farriimaha togan ee lagu soo bandhigay barnaamijyada raadiyaha, kooxdu waxay is weydaarsadeen fikrado ku saabsan sidii loo horumarin lahaa deegaankooda ku nool xaafadooda waxayna go'aansadeen inay dejiyaan nidaam ay siinayaan haween kasta lacag aad u yar toddobaad kasta.
Caadada, oo loo yaqaan “Tontine,, Waxay wakiil uga tahay kooxda Ni Ima fursad weyn oo ay ku joojiso inay dhaqaale ahaan ku tiirsanaato ragga. Haweeney kasta oo ka mid ah kooxda waxaa la weydiiyay inay ku tabarucdo xoogaa lacag ah isla markaana barkadaas lacagta ah waxaa markaas la siinayaa mid ka mid ah xubnaha kooxda. Toddobaadka soo socda isla lacag aruurintii ama Tontine dhici lahaa oo loo rogi lahaa qof kale oo kooxda ka mid ah. Nidaamkani wuxuu ka faa'iideystey dhammaan haweenka, maadaama ay u isticmaali karaan qadarka la ururiyey maalgashi yar si ay u horumariyaan mashaariic shaqsiyeed ama ay u kobciyaan ganacsiyada yaryar ee ay iyagu leeyihiin - sida iibinta nacnaca, ama samaynta iyo iibinta rootiga.
Laakiin sheekada Ni Ima Imaam halkaas kuma dhamaanayso. Iyada oo lagu dhiiri galinayo haweenka inay yimaadaan gurigooda usbuuc kasta oo ay kaqeyb galaan Tontine, Ni Ima ugu dhakhsaha badan aad ayuu caan u noqday oo loo ixtiraamo Muddo yar gudahood, waxaa loo arkaa inay ahayd hoggaamiye bulshada ka tirsan. Waxaa xitaa la weydiiyay madaxa xaafada in uu heshiisiyo khilaafka u dhexeeya dhalinyarada xaafada iyadoo la adeegsanayo farriinta ay iyada iyo kooxdeedu ka soo uruuriyeen idaacadaha EAI soo saaray ee ay dhageystaan ​​usbuuc kasta.
Aqoonsiga Ni Ni Ima wuxuu sameynayay isbadal dhab ah, mashruuca Nabadda ee loo maro hormarinta (PDEVII) wuxuu siiyay deeq dheeri ah si loogu tababaro haweenka maxalliga ah sida wax loo akhriyo iyo sida loo fuliyo howlaha wacyigelinta ee Fada, oo ah goobta bulshada ee ay dhalinyarada sida caadiga ah ku kulan xaafadeeda.
Tani waa sida, awoodda macluumaadku u baddali karto nolosha. Sidan ayaa ah sida farriimaha raadiyaha ee la xiriira ay uga gudbi karaan mowjadaha FM-ka isla markaana ay Ni Ima iyo haweenkeeda deriska ah uga dhigaan wakiillo waxbarasho, awood iyo dhiirigelin bulshada ku nool. Tani waa sida sheekooyinka waxtarka leh ee dhalaalaya sida Ni Ima's ay u noqon karaan.
Thanks to PDEVII waxaan waxbadan ka baranay xoojinta, ku saabsan ka hortaga xagjirnimada rabshadaha ah waxaana helnay dhowr tababar oo naga caawiyay inaan hagaajino habka nolosheena; waxaan nahay dad aad iyo aad u madaxbanaani hadda. ”	 Ni Matou Boubacar
Xubin ka tirsan kooxda dhagaystayaasha Tashi da Kanka